OGAYSIIS OGAYSIIS, TARTANKA SHEEKO IYO SHAAHID
Thursday June, 21 2018 - 05:35:02
Thursday March 01, 2018 - 18:24:06 in by salman abdi
Seeska Hiddaha iyo Dhaqanka (Redsea Cultural Foundation)iyaga oo ka duulaya fikradda aasaaska u ah jiritaankooda oo ah inay ka qayb qaataan wax kasta oo horumarinaya taabbagelinta dhigista, fidinta hiddaha iyo suugaanta; xoojinta fanka iyo farshaxanka; baahinta dhaqanka qorista iyo akhriska iyo gaar ahaan kobcinta qoraalka Af-Soomaaliga, waxa ay soo ban dhigayaan Kulankii Tobnaad ee ku baratanka Sheeko curinta Toolmoon, "Sheeko iyo Shaahid”.
Tartanka "Sheeko iyo Shaahid” waxa qeexaya xeerkan.
Waxa lagu tartamayaaSheeko Dheer. Qoraalku waa in uu noqon karo buug, haddii hadhow la daabacayo. Qeexidda la siiyey Sheeko Dheeri waa in aan qoraalku ka yaraan 36000 oo xaraf oo u dhiganta 20 bog (boggii waxaa loo xisaabinayaa inuu yahay 30 sadar oo min 60 xaraf ah, qiyaastii 1800 oo xaraf boggiiba). .
Qoraalka waxaa lagu soo gudbin karaa gacantaisaga oo daabacan oo aanay dusha kaga qornayn magaca qoraaga iyo astaan kale toona; waxaa bogga kowaad lagu qorayaa cinwaanka sheekada. Waxaa la soo raacinayaa gal xidhan oo ay ku qoran tahay warbixinta ku cad farqadda 5aad. Waxaa la keenayaa cinwaankan: Xarunta Dhaqanka ee Hargeysa, Waddada 26ka Juun, Shacabka, Hargeysa, inta ka horreysa 8.00 habeennimo ee 15/04/2018.
Qoraalka waxaa iyana lagu soo gudbin karaaisaga oo elegtaroonig ah (pen drive, floppy disk ama se e-mail). Waa inuu qoraalku ku qoran yahay qorme caadi ah (text file editor, tex, MS Word, iwm). Waxa bogga kowaad lagu qorayaa cinwaanka sheekada. Waxaa la soo raacinayaa e-mail gaar ah oo gudihiisa ay ku qoran yihiin dhammaan xogta ku cad farqadda 5-aad. Waxa e-mailka loo soo dirayaa inta ka horraysa 12.00 habeenimo ee 16/04/2018 emailkasheeko@redsea-online.org, loona dirayaa nuqul kale info@hargeysaculturalcenter.org. Qofku waa inuu hubiyaa in e-mail kiisa la helay. Haddii aanu jawaabtaas ku helin muddo saddex cisho ah, waa inuu gacanta ka keenaa sida ku cad farqaddan sare. Haddii aanay suuragal ahayn inuu gacanta ka keeno, waa in uu ka eegaa cinwaanka internetka www.hargeysaculturalcenter.org iyo www.redsea-online.com halka laga la soo xidhiidhayo tartanka oo teleefon u soo diraa.
Xuquuqda Qoraalka(Copyright)ee sheekooyinka
Xuquuqda Abuurka Qoraalka(intellectual property copyright)waxay mar kasta u dhawran tahay qoraaga sheekada.
Ka-qaybgalka tartankani wuxuu ku farayaa oggolaanshaha farqad kasta oo xeerkan ka mid ah.
Faahfaahin dheeraad ah ka eeg: http://www.hargeysabookfair.com, http://www.redsea-online.com, http://www.hargeysaculturalcenter.org amase u qora e-mail info@hargeysabookfair.com.
Madaxweynaha Somaliland Oo Abaal Marin Gudoonsiiyey Ardaydii Kaalmaha Hore Ka Galay Tartanka Quraanka Bisha Ramadaanta
Burco: Daawo Wasaarada Dhalinyarada Ciyaraha Gobolka Togdheer Furtay Tartanka Bisha Ramadan
23/05/2018 - 15:18:01
25/04/2018 - 19:26:40
Boorama: Magaladda Boorama Oo Laga Bilaabay Tartanka Oradada Iyo Mudada U Socondoono.
25/04/2018 - 19:07:49
Muqdisho:- Tartanka Orodka gaaban Mini Marathon oo lagu qabtay magaalada Muqdisho.
France:- Hogaamiyaha mucaaradka Farc ee Colombia oo tartanka doorashada isaga baxay Iyo Sababta.
11/03/2018 - 08:27:04